बेलायतमा घटेन त्रासदी, थलिँदै नेपाली समुदाय – Nepalilink
06:29 | ११:१४
बेलायतमा घटेन त्रासदी, थलिँदै नेपाली समुदाय
नेपाली लिङ्क जनवरी ३०, २०२१
लन्डन–लन्डन नर्थ ह्यारोमा रेस्टुरा चलाइरहेकी सरस्वती केसीलाई कोरोना भाइरस निकै अभिशाप बन्यो । व्यवसाय डामाडोल त छँदै छ, पहिलो लहरमा ससुरा गुमाइन् । आफन्तजन संक्रमित भए । ‘दिनहुँ मान्छे मरेको सुन्दासुन्दा वाक्क लाग्न थालिसक्यो । साथीभाइ गुमाउनुपरेको छ । आाफैंलाई कुन बेला के हुने हो थाहा छैन । भेटघाट ठप्प छ । वास्तवमा ज्यादै मानसिक तनाव हुने रहेछ,’ केसीले वेदना सुनाइन्, ‘व्यवसाय पनि छ भन्ने मात्र हो । सरकारले थोरै राहत नदिएको भए उहिल्यै ताला लागिसक्थ्यो ।’
लन्डनको नर्थविक पार्क अस्पतालमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्याको लेखाजोखा छैन । त्यहाँ नेपाली कैयौंले पनि ज्यान गुमाए । सोही अस्पतालमा सुपरभाइजरका रूपमा कार्यरत विशाल तामाङ मुटु दह्रो पारेर काममा निस्कने गरेको बताउँछन् ।
‘अस्पताल कोभिड बिरामीले भरिएका छन् । आँखै अगाडि मानिस मरेको देख्दा चर्को मानसिक तनाव हुन्छ’, उनले भने । आफूले कोभिड खोपको पहिलो डोज लिएर केही हदसम्म मन शान्त भए पनि अस्पतालको भयावह स्थितिले आक्रान्त हुनुपरेको तामाङको अनुभव छ ।
कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष मारमा बेलायतको नेपाली डायस्पोरा पनि परेको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल बेलायतमा कोभिड संक्रमणबाट अहिलेसम्म करिब ७५ नेपालीले ज्यान गुमाएका बताउँछिन् । मृतकमध्ये अधिकांश भूतपूर्व गोर्खा र तिनका परिवार छन् । ‘कोभिडबाट मृत्यु भयो भनेर दूतावासमा खबर नआउने भएकाले यकिन तथ्यांक पाउन गाह्रो छ,’ खनालले भनिन्, ‘कतिले बेलायती पासपोर्ट लिएकाले पनि खबर नगरेको हुन सक्छ । कतिपयले आफ्नो गोपनीयता खोल्नै चाहन्नन् ।’
दूतावासले बेलायतमा लकडाउन जारी रहेका कारण आफ्ना नियमित कन्सुलर सेवाहरु जस्तै राहदानी नवीकरण, यात्रा अनुमतिपत्र, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र, भिसा एवं कागजात प्रमाणीकरण हुलाकमार्फतै गरिरहेको छ ।
नेपाली समुदाय मात्र होइन अन्योल, त्रास र संकट सर्वत्र छ यतिखेर । बेलायतले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सामना गरिरहेको अवस्था छ । भाइरसको नयाँ भेरियन्टले झन् आक्रान्त छ ब्रिटेन । बेलायतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या शुक्रबारसम्म एक लाख चार हजार ३७१ पुगिसकेको छ ।
भाइरस संक्रमण अत्यधिक फैलिएपछि बेलायत अहिले तेस्रो राष्ट्रिय लकडाउनमा छ । बेलायतस्थित कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयमा इपिडिमियोलजी तथा हेल्थ केयर रिसर्च विषयका एसोसिएट प्रोफेसर डा. ओम कुर्मीका अनुसार, सुरुमा यो नयाँ भाइरस (भेरिएन्ट) लगभग ७० प्रतिशतसम्म संक्रामक रहेको जनाइएको भए पनि हाल यसको मृत्युदर पुरानोको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी पाइएको छ ।
कुर्मीले हालसम्मको अध्ययनले प्रयोगमा आइसकेका फाइजर–बायोएनटेक र अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका दुवै खोप नयाँ भेरिएन्टमा पनि प्रभावकारी देखिएको बताए ।
व्यापार, व्यवसाय सबैतिर ठप्प छ । २४ सै घण्टा जागा रहने सेन्ट्रल–लन्डन चकमन्न देखिन्छ । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय अनलाइनका भरमा सीमित छन् । नर्थहयाम्पटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक डा. बुद्धि पाठकका भनाइमा ‘जी–७’ मुलुकमध्ये कोरोनाका कारण बेलायत दोस्रो धेरै प्रभावित छ । खासगरी हस्पिटालिटी र रिटेल क्षेत्र बढी मारमा छन् ।
सन् २०२१ मा बेलायतको जीडीपी ५. ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म बढ्ने आशा गरिएकोमा जारी लकडाउनले त्यसविपरीत गएको छ अर्थतन्त्र । करिब १ करोड कामदार सरकारको तलब प्याकेजमा आश्रित छन् । ‘देश बजेट घाटामा छ । गत डिसेम्बरमा मात्र ३४ अर्ब पाउन्ड सापटी लिएको सरकारले अहिलेसम्म करिब २ खर्ब ८० अर्ब पाउन्ड सापटी लिएर धानिरहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभइन्जेल यसरी कतिन्जेल चल्छ ?’ डा.पाठकले प्रश्न गरे । बेलायती अर्थतन्त्रको आकार सन् २०२० को फेब्रुअरीको तुलनामा ८.५ प्रतिशतले सानो भएको जनाइएको छ ।
खोपले जगाएको छ आशा
बेलायतमा कोभिड १९ विरुद्ध इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो खोप पनि जारी रहेकाले मानिसमा आशा भने जगाएको छ ।
बेलायतमा शुक्रबारसम्म ७८ लाख भन्दा बढीले कोरोना विरुद्ध खोपको पहिलो डोज लिइसकेको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ । फेब्रुअरी दोस्रो सातासम्म करिब डेढ करोड मानिसलाई खोप लगाउने अभियानमा छ बेलायत । बेलायतमा झन्डै ५० ठूला खोप केन्द्रबाट उल्लेख्य संख्यामा कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप दिइँदै आइएकोमा छ ।
अहिले करिब १ हजार जीपी, २५० अस्पताल र फार्मेसीहरुबाट पनि खोप दिन थालिएको छ ।